သတင်း - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီအတွက် မည်သို့သောပုလင်းကို အသုံးပြုသနည်း။
Essential Oil အတွက် ဘယ်လိုပုလင်းမျိုးသုံးလဲ။
ပုလင်းကိုသိရှိရန် ဦးစွာအလေးချိန်ကိုကြည့်ပါ။တူညီသော သတ်မှတ်ချက် ပုလင်းများသည် ပိုလေးသည်။ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ပုလင်းအောက်ခြေသည် အလိုအလျောက်မှိုဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးပါ (အလိုအလျောက်မှိုသည် လက်စွဲမှိုပုလင်းထက် အတော်လေး ကောင်းမွန်သည်)။အလိုအလျောက် မှိုပုလင်း၏ အောက်ခြေတွင် အပေါက်တစ်ခုရှိသည်။မတူညီသော ထုတ်လုပ်သူ၏ အပေါက်များသည် အဝိုင်းနှင့် စတုရန်းအပါအဝင် ကွဲပြားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပုလင်းရဲ့ တူညီမှုကို ကြည့်ပြီး ပုလင်းကို အလင်းရင်းမြစ်ဘက်ကို လှည့်ပါ။ပုလင်းကောင်းကောင်းတစ်လုံးက အလင်းရောင် ပြန့်ကျဲမသွားဘူးဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ပြန့်ကျဲနေသောအလင်းရောင်သည် ပုလင်းနံရံ မညီမညာဖြစ်နေကြောင်း ညွှန်ပြသည်။Essential Oil ပုလင်းများကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
ဖန်ပုလင်းထုတ်လုပ်သူများအတွက် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန် အရေးကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဖန်ပုလင်းထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးခြင်းနည်းပညာနှင့် ဖန်ချို့ယွင်းချက်အွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်းစနစ်တို့ကို အသုံးချမှုနှင့်အတူ ဖန်ပုလင်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့် ဖန်ပုလင်းများ ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းအရှိန်သည် အလွန်အရှိန်မြှင့်လာခဲ့သည်။မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပုလင်းပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
Essential Oil ကို အမှောင်ဖန်ခွက်ထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ဖန်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများနှင့် ကွန်တိန်နာများတွင် အားသာချက်များစွာရှိသည်။
1. Glass material သည် ကောင်းသော အတားအဆီး စွမ်းဆောင်ရည် ရှိပြီး အကြောင်းအရာများဆီသို့ အောက်ဆီဂျင်နှင့် အခြားသော ဓာတ်ငွေ့များ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကောင်းစွာ တားဆီးနိုင်ပြီး ပါဝင်သည့် အရာများ၏ မငြိမ်မသက်သော အစိတ်အပိုင်းများကို လေထုသို့ ကြွေမသွားစေအောင် တားဆီးပေးနိုင်သည်။
2. မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပုလင်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထုပ်ပိုးမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်၊
3. Glass သည် အရောင်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
4. ဖန်ပုလင်းများသည် ဘေးကင်းပြီး တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု၊ ကောင်းမွန်သောချေးခံနိုင်ရည်နှင့် အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အက်ဆစ်ထုပ်ပိုးရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။